Izindaba - I-Beijing Bureau Ihlola Ukusebenza Kwezinga Lamazwe Ngamazwe Nokuvimbela Nokulawulwa Komqedazwe
IBeijing Bureau Ihlola UkuSebenza KweMeyili Yamazwe Ngamanye Nokuvimbela Nokulawulwa Komqedazwe
Muva nje, iPhini likaMqondisi weBeijing Post Administration lihole ithimba laya esikhungweni se-Air Mail Processing Centre ukuyophenya ngokusebenza kweposi lokungenisa nokuthumela kwamanye amazwe, ligxile ekuhlolweni kwe-magciwane kanye nokuvimbela ubhadane lwemeyili engenayo yamazwe omhlaba.
Ngesikhathi kuphenywa, iBeijing Bureau yabuza ngokuningiliziwe mayelana nokusebenza kwamanje kwezindiza emhlabeni jikelele, yabheka ukuphathwa kokulayishwa kweposi nokuthulwa, ukuhlungwa, nokubambisana namasiko ukubheka imeyili engenayo. Kwagcizelelwa ukuqaliswa kokunamathela esikhungweni se-airmail esikalini sokushisa komzimba, ukuphathwa okuvaliwe esizeni, ukubulala amagciwane njalo kwendawo yokukhiqiza kanye nendawo ehhovisi ephakathi, kanye nokuqaliswa komsebenzi wokulwa nobhubhane njengezixhumanisi ezingaphansi kanye nobuningi bemvamisa ukhiye wokubulala amagciwane weposi elingenayo.
I-Beijing Bureau yagcizelela ukuthi isimo samanje esiwumqedazwe sokunqanda nokulawula sibi, futhi amabhizinisi eposi kumele alandele ngokuqinile izidingo ze "Iziphakamiso zeState on the Operational Standards of Post Express Production Operations ngesikhathi se-Epidemic Prevention and Control (Second Edition)" kuya ku thuthukisa amazinga okuvikela nokulawula futhi uqinise izingqinamba eziqinile. Bhekana ngempumelelo nokususwa kwesiza kanye neposi i-mail express, futhi uvikele ngokuqinile ukusabalala kwesimo sobhubhane ngesiteshi sokulethwa. Ngasikhathi sinye, ngokuya ngezidingo zikahulumeni kamasipala, kufanele ahlele ngokushesha futhi asebenzise ukutholwa kwabasebenzi nge-nucleic acid, nokuqhubeka
ukuqinisa ukuphathwa nokulawulwa kwabasebenzi.